Eziphezulu ze-13 ezikwiWebhusayithi ezifundisa isiNgesi kwi-2022
Ukuba ufuna ukuba bhetele ngesiNgesi, ungaya kuluhlu lwewebhusayithi ezifundisa isiNgesi kwi-Intanethi ekuxoxwe ngazo kule posi yebhlog, sayina kwenye kwaye uqalise ukufunda ngaphandle kwengxaki.
Ukuphunyezwa kwetekhnoloji kwindawo yemfundo kuzise izibonelelo ezininzi, kukho into enePDF apho ungafumana khona iincwadi zakho kunye nezinto zekholeji njengeefayile zePDF kwaye uzigcine kwifowuni okanye kwilaptop yakho endaweni yokuthwala izinto ezinzima. Iiprojektha, iilaptops, ii-smartphones, kunye ne-intanethi zezinye zezixhobo zedijithali ezibe negalelo ekuguquleni indlela esifundisa nokufunda ngayo.
Ngokwam, ndicinga ukuba eyona nto ilungileyo kufuneka ibe ngumgama kunye nokufunda kwi-Intanethi, apho izixhobo zedijithali zisetyenziselwa ukuqhuba iiklasi ezisebenza ngempumelelo kubafundi abangahlali kufutshane neziko okanye njengakwimeko yobhubhane wamva nje apho abafundi bengenaye enye. ukukhetha kodwa ukuqhubeka ufunda ekhaya, imfundo ye-intanethi igcine imini ngokusetyenziswa kwezi zixhobo zedijithali.
Nangona ukufunda kwi-Intanethi ayisiyonto intsha, ikukuba uninzi lwezikolo bezinyanzelisiwe ukuba zikwamkele kwangoko kodwa emva koko ubhubhane wabetha kwaye banyanzelwa ukuba bakwamkele. Ngapha koko, kukho iyunivesithi eyamkelweyo eyaziwa ngokuba yiYunivesithi yaBantu ebonelela ngeenkqubo zayo zonke zemfundo kwi-100% kwi-Intanethi kwaye unokufumana isidanga, isidanga sobugqirha okanye isidanga sobugqirha xa uphumelele.
Oku kukubonisa nje ukuba kude kangakanani imfundo kwi-Intanethi. Kwakhona, kukho amaqonga okufunda kwi-Intanethi amaziko amaninzi aphambili asebenzisanayo ekuhambiseni imfundo engenamthungo kubafundi kuzo zonke iindawo zehlabathi. Kwaye ngamanye amaxesha, banikezela ngeenkqubo ezikhokelela kwiidigri ezahlukeneyo ezivunyiweyo kwaye zamkelwe yi-HRs kwihlabathi liphela.
Ngaphandle kokubonelela ngezifundo zasekholejini nezaseyunivesithi, ezi ziqonga zokufunda ezikwi-Intanethi zikwabonelela ngeenkqubo zokuziphucula. Umzekelo, ukuba uyazi isuntswana lenkqubo okanye kakhulu kwaye ufuna ukuphucula, amaqonga afana neKhan Academy, Coursera, Udemy, kunye noAlison banikezela ngeenkqubo eziphambili, eziphakathi, kunye nabaqalayo kwinkqubo.
Ezi ziqonga zikwalungele "ukuvavanya amanzi" ngaphambi kokuya kufunda eyona khosi iphambili eyunivesithi. Kananjalo, abakhonzi eyunivesithi okanye abafundi beekholeji bodwa, amaqonga anjengeKhan Academy abonelela ngezifundo zasimahla kwi-Intanethi kubafundi bezikolo eziphakamileyo (K-12), kukwakho namanye amaqonga amaninzi azinikele ekukhonzeni abantwana bezikolo eziphakamileyo.
Ukufunda kwi-Intanethi kuza nezibonelelo ezininzi kubandakanya ukuguquguquka, ixabiso eliphantsi, ukuzihambela ngokwakho, ukugqitywa ngokukhawuleza, kwaye zininzi zasimahla (ii-MOOCs).
Sililungiselele eli nqaku kwiiwebhusayithi ezikwi-intanethi zokufundisa isiNgesi ukunceda abafundi abafuna ukuba bhetele kwizakhono zabo zokuthetha nokubhala isiNgesi, okanye abafuna ukuthatha uvavanyo lobuchule besiNgesi kwizifundo zamanye amazwe, kunye nabantu abanqwenela ukuthatha Umsebenzi wokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi ukufumana umvuzo ongaphezulu.
Ukufundisa isiNgesi kwi-Intanethi yindlela elungileyo yokufumana imali ekhaya kwaye ukuba ufanelekile emva koko ukuqeshwa akufuneki kube yingxaki.
1 Yintoni iwebhusayithi ekuFundisa isiNgesi kwi-Intanethi?
2 Iimfuneko zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi
3 I-13 yeWebhusayithi yokuFundisa isiNgesi ekwi-Intanethi
3.1 1. IVIPKID
3.2 2. Ukutya
3.3 3. 51 Thetha
3.4 4. Iindlebe Zobugqi
3.5 5. IDaDa ABC
3.7 7. IiQkids
3.8 8. Ukukhanya
3.9 9. EF IsiNgesi Kuqala
3.12 12. Iskimatalk
3.13 13. Intlanzi
Yintoni iwebhusayithi ekuFundisa isiNgesi kwi-Intanethi?
Iiwebhusayithi zokufundisa isiNgesi ezikwi-Intanethi ziiwebhusayithi eziyilelwe ukufundisa ulwimi lwesiNgesi kubafundi ngoqhagamshelo lwevidiyo, ngobuchule, kwi-intanethi. Ukufundiswa kunokwenziwa ngokukodwa okanye ngokufundisa abafundi abaninzi kanyekanye. Nokuba ufundisa isiNgesi kwi-Intanethi okanye ufunda isiNgesi kwi-Intanethi, inokwenziwa naphina xa une-Wi-Fi ezinzileyo okanye uqhagamshelo lwedatha kunye neelaptop okanye iPC.
Iiwebhusayithi zokufundisa isiNgesi ezikwi-Intanethi zivulelekile kubafundi abavela kwihlabathi liphela, akukho mazwe athintelweyo ekujoyineni kwaye akukho mfuneko yokuba abafundi bajoyine. Kodwa njengomfundisi-ntsapho, kusenokubakho iimfuno ekufuneka kuhlangatyezwane nazo ngaphambi kokuba ukwazi ukufundisa abafundi isiNgesi kwezi webhsayithi.
Iimfuneko zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi
Yiba sisithethi somthonyama okanye esisisiNgesi (yahlukile kwiwebhusayithi)
Ikhompyuter yedesktop okanye ilaptop ehambelana neMac okanye iWindows OS enekhamera yewebhu ekumgangatho ophezulu
Ukufumana ezi mfuno kunye nokuqeshwa ukuze ufundise isiNgesi kwi-Intanethi kuya kuba sisiqwenga sekhekhe kwaye ungonwabela ngokwenene ukusebenza ekhaya kunye nokufumana imali efanelekileyo ngelixa usenza njalo.
I-13 yeWebhusayithi yokuFundisa isiNgesi ekwi-Intanethi
Okudweliswe ngokuthe ngqo apha ngezantsi zezona webhusayithi zibalaseleyo zokufundisa IsiNgesi kwi-intanethi kunye neenkcukacha zazo ezinikwe ngakumbi ngezantsi kunye namakhonkco ezicelo zabafundi okanye ootitshala ukuba babhalisele leyo ifanele iimfuno zabo.
I-VIPKID yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi ngombono wokudala igumbi lokufundela lehlabathi apho bonke abantwana baziva bexhumekile kwimfundo yabo. Akukho ukuzibophelela ubuncinci beyure kwaye iklasi nganye yimizuzu engama-25 kwaye ungafundisa uninzi okanye iiyure ezimbalwa njengoko ufuna, kokukhona ufundisa, kokukhona ufumana umvuzo. Iwebsite ilawula ukubonelelwa kwesicwangciso sesifundo ukuze ukwazi ukujonga ekufundiseni.
Ootitshala abakwi-VIPKID benza phakathi kwe- $ 14-22 ngeyure kwaye kufuneka bazibophelele kwisivumelwano esisayiniweyo seenyanga ezi-6 kodwa akukho zimbalwa zeyure ezifunekayo kwaye unokuhlala uthatha ikhefu. Ukuze ube ngutitshala, kufuneka ukuba ubuncinci iminyaka emibini yamava okufundisa, ufumane isidanga seminyaka emine kwi-bachelor kuyo nayiphi na intsimi okanye enkulu, kwaye ulungele ngokusemthethweni ukusebenza e-US okanye eCanada.
Kuluhlu lwewebhusayithi ezifundisa isiNgesi kwi-Intanethi, iCambly ithandwa kakhulu kwaye oku kungenxa yokuba iimfuno zokuba ngutitshala kwiwebhusayithi azikho nzima njengezinye. Akukho TEFL, amava okufundisa, okanye isidanga esifunekayo kwaye akufuneki ukuba ube sisithethi sesiNgesi semveli ukuze uqeshwe. Le webhusayithi ilunge ngakumbi kwabo bafuna ukufundisa ngokungakhathali "njenge-hustle esecaleni" kunye nokufumana umvuzo ongezelelweyo.
Nangona kunjalo, umvuzo awukho mkhulu kwi- $ 10.20 ngeyure, unokufundisa kwi-app usebenzisa i-smartphone yakho okanye iwebhu usebenzisa ilaptop yakho. Kananjalo ootitshala bahlawulwa ngeveki.
3. 51 Thetha
Ukuba unomdla wokufundisa isiNgesi kubantwana abaneminyaka eyi-4 ukuya ku-12 kwaye unamava kuwo, ke intetho ye-51 yindawo yakho. Ukufundisa kwiwebhusayithi konke malunga nokuba nomdla wokufundisa abantwana kunye nokwenza unxibelelwano olwahlukileyo ngelixa ufumana umvuzo, ukuya kuthi ga kwi-15 yeedola ngeyure kunye nezinye iibhonasi.
Ootitshala kufuneka babe nesidanga se-bachelor kunye nesatifikethi sokufundisa esaziwayo njenge-TEFL okanye i-TESOL. Ukuzibophelela kungunyaka omnye kwaye elona xesha lincinci lokufundisa ziiyure ezingama-30 ngenyanga.
Iindlebe zoMlingo yenye yewebhusayithi ezikwi-intanethi zokufundisa isiNgesi ezineqonga elitsha lokufunda isiNgesi kwi-Intanethi labafundi abaphakathi kweminyaka eyi-4-12. Inkampani esekwe e-China ihlawula i-26 yeedola ngeyure kwaye yenye yezona zinto zibhatalwa kakhulu kwimisebenzi yokufundisa kwi-Intanethi kwaye awudingi nesidanga se-bachelor ukuze ufake isicelo kodwa kuya kufuneka usukele enye kwaye ube yi-TESOL okanye i-TEFL eqinisekisiweyo.
Bakhetha nezithethi zesiNgesi zemveli, ke, ukuba uvela eCanada, eNew Zealand, e-US, eMzantsi Afrika, e-Australia, nase-UK ungafuna ukutsiba kule webhusayithi kwaye ufumane umvuzo kwindlu yakho.
5. IDaDa ABC
I-DaDa ABC yenye yezona ndawo ziphambili zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi ezizinze e-China kunye namaqabane amaziko emfundo ekumgangatho ophezulu kubandakanya i-Oxford University Press kunye ne-Pearson Education. Uya kudinga isidanga sebhatshela, isatifikethi sokufundisa, ubungqina bamaxwebhu ngamava okufundisa, kunye namaxwebhu axhasayo emvelaphi engeyiyo yolwaphulo-mthetho phambi kokuba uqeshwe ukufundisa kule webhusayithi.
Iklasi nganye yimizuzu engama-30 yexesha lokufundisa kwaye ootitshala banokukhetha nangaliphi na ixesha abafuna ukusebenza ngalo kodwa kufuneka badibane nobuncinane beeyure zomsebenzi zeeyure ezili-10 ngenyanga. Ootitshala bafumana i- $ 25 ngeyure kubandakanya iibhonasi ukuya kuthi ga kwi-7 yeedola.
IGoGoKid yenye yezona ndawo ziphambili zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kodwa yeyabantu baseCanada nabaseMelika abanesidanga seBachelor kunye nesiqinisekiso se-TEFL. Iklasi yimizuzu engama-25 ubude kwaye ufumana imali eyi-14-25 ngeyure ufundisa abantwana baseTshayina abaneminyaka emi-3 ukuya ku-12. Iqonga liza kwenza izicwangciso zezifundo, ukumakisha umsebenzi wasekhaya, okanye ukuthetha nabazali ngelixa ujolise kuphela ekufundiseni.
I-Qkids yenye yewebhusayithi ezihamba phambili zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi ezidibanisa ootitshala baseNgesi baseNyakatho Melika nezigidi zabafundi abancinci bamazwe aphesheya abaneminyaka emi-4 ukuya kweli-12 ubudala. Kuphela ngootitshala baseMelika nabaseCanada abaqeshwe eqongeni kwaye baqala ukusebenzisa iqonga lokufunda elisekwe kumdlalo ukukhokela abafundi kumava amnandi naguqukayo ekharityhulamu.
Iimfuno zootitshala zibandakanya isidanga sebhatshela, isatifikethi sokufundisa isiNgesi, ukuqhubeka kwakhona, 1-2 imizuzu yokungenisa ividiyo, kunye nomzobo wekhompyuter.
I-Learnlight liqonga elidibanisa ootitshala besiNgesi nabantu abadala abahluka ngokwenkcubeko kumacandelo amaninzi. Unokuzibandakanya kwiiseshoni zomntu ngamnye, amaqela abonakalayo, iikhosi zezakhono ezikhethekileyo, kunye novavanyo lwenqanaba. Kuya kufuneka ube nesatifikethi sokufundisa ulwimi lwangaphandle, ubuncinci ubuncinci iminyaka emibini yamava okufundisa ulwimi, ubuchule kulwimi lwesiNgesi, kwaye unezixhobo eziyimfuneko zedijithali zokubamba iiklasi kwi-Intanethi.
9. EF IsiNgesi Kuqala
IsiNgesi sokuqala liqonga apho ootitshala ababandakanyekayo badibana khona kwi-Intanethi ukuze babafundise isiNgesi. Njengotitshala, uza kukhetha ishedyuli yakho kwaye ngoncedo lwezixhobo zedijithali, ufundise naphi na emhlabeni. Iimfuno zokufundisa ziquka ukuba sisithethi sesiNgesi esityibilikayo ngokupheleleyo kwinqanaba le-C2, ukufumana isidanga se-bachelor kuyo nayiphi na into enkulu, ukuqinisekiswa kwe-TEFL, kwaye ube ngummi wase-US.
I-SayABC yenye yewebhusayithi ezifundisa isiNgesi kwi-intanethi kunye nomvuzo ukuya kuthi ga kwi-19 yeklasi nganye kwiklasi nganye ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-40 kwaye ufumana ukuseta iiyure zakho. Ootitshala abanomdla wokufaka isicelo kufuneka babe zizithethi zesiNgesi, baxhotyiswe ngeekhompyuter ngesantya sonxibelelwano esikhawulezayo, babambe isidanga sebhatshela okanye ngaphezulu, banonyaka omnye wamava okufundisa, kwaye babambe isatifikethi sokufundisa.
Ootitshala basebenza emakhaya kwaye bafundisa abantwana abangamaNgesi abaphakathi kweminyaka emi-5 neli-12 ubudala.
I-iTalki yenye yeewebhusayithi ezahlukeneyo zokufundisa isiNgesi kwi-intanethi ezixhasa abafundi abavela eBrazil, eRashiya, naseTshayina, ngenjongo yokubafundisa isiNgesi. Iqonga liqesha ootitshala abavela e-UK, e-US nase Canada. Kwiwebhusayithi, usenokukhetha ukuba ngumhlohli wolwimi ongasifuniyo isatifikethi se-TEFL, okanye ube ngutitshala oqeqeshiweyo ofuna isatifikethi sokufundisa esinjenge-TEFL okanye iTESOL.
Njengotitshala, unokuseta amaxabiso akho ngeyure kwiwebhusayithi kodwa isixa esiqhelekileyo esenziwa ngutitshala ngeyure siphakathi kwe- $ 9 kunye ne- $ 13.
ISkimatalk yenye yewebhusayithi ezifundisa isiNgesi kwi-Intanethi ezivumela abafundi ukuba bafunde isiNgesi kwi-intanethi naphi na, nangaliphi na ixesha nangoko banazo izixhobo eziyimfuneko zokujoyina iklasi. Ootitshala beSkimatalk ngabantu abathetha isiNgesi kwaye izifundo ziqhutywa umntu ngamnye. Nangona izatifikethi zokufundisa kunye namava kungafuneki kodwa ukuba unayo, baya kukunika ukhuphiswano.
Kuluhlu lwethu lokugqibela lwewebhusayithi ezikwi-intanethi zokufundisa isiNgesi yiPalfish, isicelo se-iOS kunye ne-Android apho ootitshala bahlawulwa khona ukuze bathethe nabafundi kwifowuni okanye kwiitafile zabo. Kwi-Palfish, zintathu iintlobo eziphambili zootitshala;
Ootitshala bePalfish abafundisa "intetho yasimahla", Oko kukuthi, yiya bukhoma ukusasaza kwaye wenze umxholo wabo
Abaqeqeshi bezifundo ezisemthethweni zasePalfish baseta kwangaphambili ikharityhulam kwaye banemfuno ezingqongqo zokuqesha.
I-Palfish Philippines yootitshala bekhosi-bavulekele ootitshala besiNgesi bakwiiPhilippines.
Ootitshala banokuzibekela iirhafu zabo, kufuneka babe nesatifikethi sokufundisa, kwaye babe zizithethi zesiNgesi kodwa ikhosi yasePalfish Philippines iqesha ootitshala besiNgesi kwiiPhilippines.
Ezi zezona webhusayithi zibalaseleyo zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi, ezi ziqonga zibonelela ngendlela enomvuzo kunye nemiceli mngeni yokufumana umvuzo wokuqala okanye ukongeza umsebenzi osisigxina.
Ngaba ndingayenza imali kwiwebhusayithi ekwi-intanethi yokufundisa isiNgesi?
Ewe Unga. Xa ubhalisa kwiwebhusayithi njengomfundisi-ntsapho kwaye uqeshwe, uya kuhlawulwa ngokunikela ngeenkonzo zakho zokufundisa.
Ndingasifundisa njani isiNgesi kwi-Intanethi?
Ukufundisa isiNgesi kwi-Intanethi, uhlangabeze zonke iimfuno njengoko kuxoxiwe ngasentla, khetha kuluhlu lweyona webhusayithi ifundisa isiNgesi kwaye ubhalise njengotitshala.
Ngaba ukufundisa kwi-Intanethi kufanelekile?
Ngokufundisa kwi-Intanethi, ufumana imali kwintuthuzelo yekhaya lakho kwaye udibana nabafundi abavela kwiinkcubeko ezahlukeneyo.
Iiwebhusayithi ezifundisa ngesiNgesi kwi-Intanethi
Post Previous:Izikolo ezili-10 eziBalaseleyo zamazwe aphesheya eSwitzerland